Boolis Malatariya – Page 2 – Horseed Sports Club
‘’’Horseedfc.net’’Ka hor kulumada Premier League ee dheelayaa Kooxaha KA DHEELA Premier League oo lasoo saaray kulumada saaxibtinimo
Waxaa lasoo Saaray Jidwalka Cayaaraha Saaxiibtinimo ee ay dheeli doonaan kooxaha Horyaalka Premier League dalka England Waxaana kujira kulamo adag oo ay dheeli doonaan. Hadaba ka bogo dhamaan kooxaha 20 ka ah ee Horyaalka Premier League kulamada ay dheeli doonan? ARSENAL July 22: Lens (Stade Bollaert-Delelis, Lens) 7pm July 29: MLS All-stars (Avaya Stadium, California) 2.01am August 1: Chivas
”’Horseedfc.net”’ Mourinho oo la ogaaday waxyaabaha oo Aduunka u nacbanyahay
Cayaaraha waqtiga fiidkii ah soo gala iyo kuwa ka danbeeya ma aha wax uu jecel yahay macallinka cusub ee Manchester United Jose Mourinho. Siddeed bil oo uu moogaa kaddib Premier League ayuu mar kale kasoo muuqanayaa Mourinho oo hore looga eryay Chelsea, wuxuuse ninkan jecel yahay inuu si fiican u quraacdo, kaddibna isu diyaariyo cayaaraha
”’Horseedfc.net”Sidee loo qeeybsaday Dhaqaalaha laga helay Euro 2016
Koobka qaramadda yurub 2016 ayaa 10 july lagu soo gabgabeeyay dalka faransiiiska waxaana koobka oo ay ku loolamayeen 24 dal ku guuleystay dalka Portugal oo kama dambeysti koobkan 1-0 kadib waqti dheeri ah kaga qaaday xulka Marti gelinayay France. Xiriirka kubada cagta qaaradda Yurub ( Uefa) ayaa markii uu tartanka idlaaday soo saaray sida sanadkan daqligalga
Real Madrid ayaa go’aan ka qaadan doonnto maalmaha soo aadan xiisaha ay u qabto xidiga khadka dhaxe kaga ciyaara Valencia Andre Gomes, Sida ay qoreyso Marca. Gomes, 22-sano jirkaan ayaa kusoo baxay doorasha dooqa koowaad ee Real Madrid iyadoo damacsan inee kuxoojiso khadkega dhaxe xagaaga cusub, Real Madrid iyo Valencia wali ma yeelan wax wado
Warbaahinta kala duwan ee Caalamka ayaa waxa ay aad u haadal hayaan sidii uu u dhaqmay Cayaaryahanka Hogaamiya Xulka Portugal ee Cristiano Ronaldo Waxaana habkaas lagu Tilmaamay kan ugu kaga Wanaagsanyahay Ninka ay Xafiiltamaan ee Lionel Messi. Cristiano Ronaldo oo dhaawac aad u darani ka soo Gaaray Kulankii Finalka ee koobka yurub ayaa Waxa uu soo
Macalinkii Hore ee Manchester United Sir Alex Ferguson oo xalay daawanayey kulankii Finalka ahaa ee Portugal ay 1-0 kaga qaadeen koobka yurub dalka France ayaa si goonin ah ugu hambalyeeyey Cayaaryahankiisii hore ee Cristiano Ronaldo. Sir Alex Ferguson ayaa markii ay dhamaatay cayaartii Finalka ahayd ee Xalay waxa uu ka soo degay Tarabuunka Waxaana uu Xabadka geliyey
Magaalada Paris ee Caasimada dalka France mudo Kooban waxa ay u ekaatay Caasimada dalka Portugal ee Libon ka dib markii kumanaan kun oo Taageerayaal Portugal ay ah u ku dhex dabaal dageen iyaga watat Calamada dalkooda. Taageerayaasha dalka Portugal oo aad u Faraxsan ayaa waxa ay beegsanayeen in ay tagaan Goobaha ay Caanka ku tahay
Maxaad Kala Socotaa Waqtiga Sida Rasmiga Kooxda Milan Laga Iibinaayo Ganacsato U Dhashay Dalka China
Kooxda kubada cagta Milan ayaa lagu soo waramay in ay ku dhawdahay in ay ka baxdo gacanta hogaamiyaha mudo maamulayay kooxdaa ee Silvia Berlusconi waxana la xaqiijaiyay waqtiga Milan ay maal gashi xoigan ku sameeynayaan . 7 Bishaan maanta kowda ah ee July ayaana Milan ay u noqon doontaa in boqolkiba sideedan lala wareego.
Giggs oo hadal qiiro leh wada usoo mariyay Jamaahiirta United.
imaatinka Jose Mourinho Man United oo weysay halyey jamaahiirta United agtooda qaali ka ahaa. Kadib 29-sano Ryan Giggs ayaa Man United asiga tagay, Intuu Man United joogay kooxda wuxuu u noqday tababare ku meel gaar ah iyo tababare ku xigeen, Ryan” Waan ogahay guuleysiga inee tahay kooxda Dna-Kooxdaan Waxey fursad siisaa da’ayarta, Waxey ciyaartaa kubadd
Higuan Albaabka U Furay Ku Biirista Ahtletico Madrid
Weeraryahanka xulka qaranka Argentina iyo kooxda Napoli Gonzalo Higuan ayaa soo dhaweeyay in uu ka dhinac ciyaaro kooxda qaab ciyaareedkeedu aadka u adag yahay ee Athletico Madrid oo uu leyliyo macalinka reer Argentina Diego Seomone . Macalin Diego Seomone ayaa dhawaan ku wargaliyay kooxdiisa in uu u baahan yahay weeraryahan buuxa oo ka ciyaara